Swimming Pool kuiisa chlorine, Preservatives, Disinfectant - Maochen
Swimming Pool kuiisa chlorine
Weifang Maochen Chemical Co., Ltd. ari kambani boka, kunyanya kufunga pool makemikari; Bactericides (Biocides) / Preservatives, Coal zvinhu uye zvichingodaro. Mafekitari dziri muna Weifang, Shandong Province, China. With makore anopfuura 15 ruzivo nemakemikari indasitiri, Weifang Maochen Chemical Co., Ltd. ndeimwe Premier Disinfectant bhizimisi mu China. Somunhu yakavimbika uye anonyatsozivikanwa mugadziri, tinobudisa uye ekisipoti vose munyika. makasitoma edu kubva Australia, Israel, South- kumabvazuva, Mid-kumabvazuva, EUR, US, Mexico, Chile nezvimwewo, kunyika dzinopfuura 20.
Trichloroisocyanuric asidhi 90% Hwendefa (TCCA)
Trichloroisocyanuric asidhi Multi piritsi (TCCA)
Yavaibvisa dichloroisocyanurate (SDIC)
Biocides & Preservatives (CMIT / with)
Sezvo Disinfectant kuti pool, zvitubu zvemvura inopisa, saunas, Spa; Aquaculture, hove dziva; Industry mvura kurapwa, upenyu zvakatipoteredza uye zvichingodaro
Sezvo Disinfectant nokuti pool; Industry mvura, kunwa mvura, bleaching, upenyu zvakatipoteredza uye zvichingodaro.
Rinogona kushandiswa nevakawanda sezvo disinfectant, bleaching mumiririri kana oxidant kunokonzerwa nokuda swimming-dziva, kunwa mvura, kutonhora shongwe & tsvina uye tsvina mvura etc.
Makore anopfuura 15 ruzivo
Runhare: 0086 531 -83267585
Whatspp / Yemhomho: 0086 13605417941